Galaxy Book သစ်တွေကို Q-LED Display နဲ့ Samsung ရောင်းပြီ
10th Gen Processor ၊ Q-LED Display ပါဝင်တဲ့ Galaxy Book Series ကို တန်ဖိုးသင့် စျေးနှုန်းနဲ့ Samsung ရောင်းပြီ
Galaxy Book ကို ဂလက်ဆီစာအုပ်လို့ ဘာသာပြန်ရင် ကောင်းမလား? နောက်တာပါ။
Samsung Notebook/Laptop တွေကို ဒီကလူတွေ စိတ်မဝင်စား သိတောင်မသိကြပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ သွင်းစေချင်ပါတယ်။ Apple လို Luxury Brand အပြင် Dell ၊ ASUS နဲ့ MSI တို့ရဲ့ Ultrabook ၊ Gaming Machine တွေ ရှိပါရဲ့ တချို့ Unique Features တွေ ကျနော်တို့ သုံးစွဲခွင့် မရသေးပါဘူး။
သီးသန့်မှာယူရင် ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် Spare Parts တွေနဲ့ Warranty ပိုင်း စကားပြောရရင် ပြဿနာပိုရှုပ်တာမလို့ အာမခံရှိတာကိုပဲ သုံးကြတာ များပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ ဖော်ပြချင်တာကတော့ Samsung မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Galaxy Book Series သစ် အကြောင်းပါ။
New Galaxy Book
ကျနော့်အမြင် Apple လို Galaxy ထုတ်ကုန်တွေ Ecosystem ထဲ အကျုံးဝင်လာအောင် ပံ့ပိုးထားတဲ့ မော်ဒယ်သစ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဘာလို့ ဒီလိုပြောရသလဲဆိုရင် Laptop တစ်လုံး အဆင့်မြင့်ကျတဲ့အခါ Hardware ပိုင်းကို ဦးစားပေးသလို ဒုတိယလိုက်တာ ဝယ်လိုအားနဲ့ တန်ဖိုးပါ။
ဒါပြီးသွားမှ ကိုယ်အားသာရာ ဥပမာ ASUS ထုတ်ကုန်မှာဆိုရင် ErgoLift နဲ့ Dual Screen ၊ ScreenPad သုံးပေးတဲ့အပြင် Razer က Vapour Chamber အားသာချက် သုံးပြီး 13.3” Size ထဲမှာ GTX 1650-Ti Graphics ရအောင် ထည့်ပေးတတ် ကြပါတယ်။
Razer Blade Stealth 2020 (Image: The Verge)
ဒီလို Industry Leading နည်းပညာနဲ့ ကြွားလုံးထုတ်ပြီးမှ ဆိုကြပါစို့ Ultrabook ဆို Ultrabook Level ၊ Gaming ဆိုရင် Gaming Level ယှဥ်ပြိုင်ကြပါတယ်။ ကျနော် သတိထားမိသလောက် Laptop လောကမှာ အထူးဆန်း Tech တွေနဲ့ ဦးဆောင်နေတာ ASUS နဲ့ Razer တို့ဆီကပဲ ကြားဖူးပါတယ်။
with Galaxy Tech
တခြားသော Brand တွေ မ Good ဘူးလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အခု Galaxy Book Series မှာဆိုရင် Wireless TouchPad ထည့်ပေးလာတာမျိုး Galaxy Note Series ရဲ့ Styles Pen သုံးပေးတာမျိုးက နောက်တမျိုး တွေးကြည့်ရင် Samsung Economy နဲ့ လိုက်ပါတယ်။
ဘာ Galaxy Device ပဲ သုံးသုံး ဥပမာ ဖုန်း ၊ Tablet နဲ့ Laptop ပိုင်ဆိုင်ထားရင် ပိုပြီးတော့ ပြည့်စုံတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုး သက်ရောက် စေပါတယ်။ အနီးစပ်ဆုံး Apple ထုတ်ကုန်တွေ တစုတဝေးထဲ သုံးရသလို ပိုအဆင်ပြေတာမျိုးပါ။
Q-LED on Board
Samsung အနေနဲ့ Display နည်းပညာမှာ အဓွန့်ရှည်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း Quantum-dot နည်းပညာကို Galaxy Book တွေဆီ ယူဆောင်လာပါပြီ။ Smart TV တွေမှာသာ သုံးခဲ့တယ်ဆိုမယ့် အများနဲ့မတူအောင် ကိုယ်ပိုင် Display Tech နဲ့ ပွဲထုတ်တယ်။
Image; The Verge
လက်တွေ့မှာလည်း ချီးမွမ်းခံရသလို Samsung အဆိုရ 100% sRGB ၊ DCI-P3 နဲ့ 500 nits (Like MBP 13) ထောက်ပံ့ထားတဲ့ Performer တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုလို Quality ပြည့်ဝနေတာကိုမှ HDR Support မပေးတာ ဘဝင်မကျစရာ။
Flex & Ion
Samsung ကတော့ Galaxy Book Flex နဲ့ Galaxy Book Ion ထုတ်ထားသလို ဘာကွာလဲမေးရင် Processor မတူပါဘူး။ Book Flex မှာ Ice Lake (ဥပမာ i7-1065G7) နဲ့ပဲ ရွေးနိုင်သလို Ion ကတော့ Comet Lake (ဥပမာ i7-10510U) ဆိုပြီး ကွဲနေမှာပါ။
ခုလို Processor မတူလို့ ဘာကွာသွားမလဲ Samsung ကြေညာတဲ့အတိုင်း အောက်မှာ ဆက်ပြောထားပါတယ်
Galaxy Book Series သစ်တွေဟာ Project Athena Laptop တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် Intel အဆိုရ Ultrabook တွေရဲ့ ဘက်ထရီ စံနှုန်းထက် အားပိုခံမှာပါ။
Samsung အနေနဲ့လည်း 66.9 Whr Battery သုံးလင့်ကစား Flex 13.3” ဟာ ၂၂ နာရီအထိ အသုံးခံမယ်။ Screen အရွယ်စား ပိုကြီးမယ့် 15.6” ကတော့ ၂၀ နာရီ အသုံးခံမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
Project Athena အကြောင်း ဒီဆောင်းပါး Link မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ခုလို Processor ပိုင်း မတူသလို Display ပိုင်းမှာလည်း 13.3” နဲ့ 15.6” ဆိုပြီး ရွေးချယ် ခွင့်ပေးထားပါတယ်။
Screen အရွယ်စား ပိုကြီးတဲ့ 15.6” မှာ Nvidia MX250 Graphics ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး မော်ဒယ် ၂ မျိုးလုံးမှာ 8GB ဒါမှမဟုတ် 12GB RAM Standard အနေနဲ့ သုံးနိုင်မှာပါ။
Storage ကိုတော့ အနိမ့်ဆုံး 256GB NVMe SSD မှ စသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး 1TB အထိ တိုးချဲ့နိုင်ပါတယ် (ပိုက်ဆံတော့ ပိုပေးရမယ်ပေါ့)
Galaxy Flex Alpha (Image: The Verge)
Samsung ကတော့ Book Flex ကို $1,349 (13.3”) ၊ $13,99 (15.6”) နဲ့ Book Ion ကို $1,199 (13.3”) ၊ $1,299 (15.6”) တန်ဖိုးနဲ့ ရောင်းချသွားမှာပါ။
ဒီတော့ တန်ဖိုးအားဖြင့် ပြန်တွက်ကြည့်ရင် ဘယ်လိုမြင်လဲ? စျေးကွက်ထဲ ရောင်းချနေတဲ့ Ultrabook နဲ့ မကွာဘူးဆိုမယ့် ဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ စဥ်းစားရမှာပါ။
ခုလို Flex နဲ့ Ion တို့အပြင် ပိုစျေးသက်သာတဲ့ Flex Alpha ကို Samsung မိတ်ဆက်ထားပါသေးတယ်။ သူကတော့ 2-in-1 ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီး 10th Gen Processor အသုံးပြုထားမှာပါ။ ဘက်ထရီပိုင်းမှာ ၁၇ နာရီခွဲ အသုံးခံမယ်လို့ သိရပြီး ရောင်းချသွားမယ့် စျေးနှုန်းက $829 ပါ။
Source: The Verge 1 ၊2၊ 3
10th Gen Ice Lake Processor နဲ့ ထွက်ရှိလာတဲ့ MacBook Pro 13